पत्याउनै गाह्रो -कोरोना भ्याक्सिनले शरीर ‘चुम्बक’ बनाएको दाबी - Yugantar Khabar | News Portal
Posted on June 11, 2021 June 11, 2021 by Basanta Pariyar
कोरोना भ्याक्सिनको असरको विषयमा विभिन्न प्रकारका कुरा आइरहेका छन्, कतिलाई भ्याक्सिन लगाएपछि ज्वरो आउँछ, कसैलाई आउँदैन । कतिलाई अरु पनि महसुस हुन्छन्, कतिलाई केही पनि फरक लाग्दैन । तर भ्याक्सिनको असरको विषयमा भारतको नासिकका एक व्यक्तिले निकै चकित पारिदिने दाबी गरेका छन् ।
नासिकका अरविन्द सोनारका अनुसार भ्याक्सिनको दुई डोज लगाएपछि उनको शरीरले चुम्बक झैं काम गरिरहेको छ । तर जानकारले भने भ्याक्सिनेसनका कारण यस्तो हुन नसक्ने बताए ।
अरविन्द सोनारले आफ्नो दाबीको वास्तविकता व्यक्त गर्नका लागि एउटा भिडियो सोसल मिडियामा पोस्ट गरेका छन् जसमा उनको शरीरमा सिक्का र फलामका सामान टाँस्सिएको देखिएका छन् । यो भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भएको छ ।
उनले भने, ‘म आफ्नो छोरासँग यत्तिकै कुरा गरिरहेको थिएँ । मैले कुराकानीकै बीच एउटा यस्तो खबरबारे कुरा गरे जसले मलाई चकित बनायो । छोराले भ्याक्सिन लगाएपछि मानिसको शरीरमा स्टिलका वस्तु टाँस्सिन थाल्छन् भन्यो र होला त भनेर हेर्दा त मेरो पनि त्यस्तै भइरहेको थियो ।’
सोनारका अनसार उनले चार पाँच दिन अघि एक नीजि अस्पतालमा कोभिड भ्याक्सिनको दोस्रो डोज लिएका थिए र उनलाई कुनै प्रकारको समस्या देखिएको थिएन ।
के भन्छन् जानकार ?
अरविन्द सोनारले कोभिशिल्ड भ्याक्सिनको पहिलो डोज मार्च ९ मा लिएका थिए र दोस्रो डोज जून २ मा ।
१० वर्ष अघि उनको बायपास शल्यक्रिया भएको थियो । दुई वर्षदेखि उनको मधुमेहको उपचार चलिरहेको छ ।
जब अरविन्द सोनाको शरीरमा फलाम र स्टिलका चिज टाँस्सिन थाले तब उनले आफ्ना डाक्टरलाई यसबारे बताए ।
सोनारको दाबी कति वास्तविक हुनसक्छ, यो बुझ्नका लागि बीबीसी मराठीले अन्धश्रद्धा निर्मूलन समितिका डाक्टर हामिद दाभोलकरसँग कुराकानी गरे ।
डाक्टर दाभोलकरले भने, ‘शरीरमा सिक्का र भाँडाकुँडा टाँस्सिनु भौतिक विज्ञानको हिसाबले सम्भव छ । यदि छाला ओसिल छ र टाँस्सिनले स्थानमा भ्याक्यूम क्याभिटी बनेको खण्डमा यो सम्भव छ । तर यसलाई खोपसँग जोड्नु सही होएन । हामीसँग काम गर्ने थुप्रै मानिसहरुले यस्तो दाबीको वास्तविकतालाई उजागर गरिरसकेका छन् । ’
दाभोलकरका अनुसार खोप अभियान कोरोनाविरुद्ध महत्वपूर्ण हतियार हो । यस्तोमा यसको विषयमा कुनै पनि सनसनीखेज दाबीबाट बच्नुपर्छ ।
जेजे मेडिकल कलेजका डीन डा. तात्यारावे लहानेले पनि सोनारको दाबी खारेज गरेका छन् ।
उनले भने, ‘संसारभरी एक अर्बभन्दा मानिसलाई भ्याक्सिन दिइसकिएको छ । कोभिड भ्याक्सिन र शरीरमा स्टिल र फलामका सामान टाँस्सिनुमा कुनै सम्बन्ध छैन । यसलाई भ्याक्सिनसँग जोडेर हेरिनु हुँदैन । भ्याक्सिनमा त्यस्तो कुनै पनि चिज हुँदैन ।’
दाबीको अनुसन्धान हुनेछः
नसिकका जिल्ला चिकित्साधिकारी डा. अशोक थोराटले बीबीसीसँगको कुराकानीमा यसबारे आफूलाई सोसल मिडियामार्फत् जानकारी भएको बताए ।
उनले भने, ‘हामी यसबारे अनुसन्धानका लागि विशेषज्ञ दल पठाइरहेका छौं । त्यसपछि सरकारलाई आफ्नो रिपोर्ट दिनेछौं । त्यसपछि सरकारी निर्देशनका अनुसार यसलाई हेरिनेछ ।’
अशोक थोराटले कोरोना भ्याक्सिनले यस्तो प्रकारको कुरा हुनै नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘हालसम्मको मेडिकल करियरमा यस्तो केस कहिले पनि देखिएको थिएन । सोनारको शरीरमा आएको यो परिवर्तनबारे थाहा पाउन महत्वपूर्ण छ । यो एक अनुसन्धानको विषय हो ।’
हुन त सोनारको दाबी सार्वजनिक भएपछि इन्डियन मेडिकल असोसिएशनका सदस्य समिर चन्द्रारातेले कुनै व्यक्तिको शरीरबाट धातु टाँस्सिनुको अध्ययन धातु वैज्ञानिकले पनि गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
समिर चन्द्रारातेले भने, ‘यसको कोभिड भ्याक्सिनसँग कुनै लेनादेना छैन । भ्याक्सिन लिएपछि दुखाई ज्वरो आउन सक्ला । यसबाहेक यस्ता कुरा हुन्छन् भने यसलाई भ्याक्सिनसँग जोड्न मिल्दैन । यस्ता अफवाहले खोप अभियान प्रभावित हुनेछन् । भौतिक वैज्ञानिक र धातु वैज्ञानिकले यस्ता मानिसहरुको शरीरमा धातुजन्य पदार्थ कसरी टाँस्सिन्छन् भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।’
इराकमा रकेट आक्रमण
अमेरिकामा ८.१ रेक्टरको शक्तिशाली भूकम्प
बेइजिङले अमेरिकालाई चिनियाँ नेतृत्वको ‘बद्नाम’ गर्ने काम रोक्न गऱ्यो आग्रह
लण्डनमा लकडाउन बिरुद्ध प्रदर्शन
अष्ट्रेलियामा सरकारद्वारा जारी लकडाउन र स्वास्थ्य सङ्कटकालको विरोधमा विभिन्न सहरहरूमा ठूला प्रदर्शन
अन्तरीक्षमा बेलुनमा उडेर बिहे गर्ने चाहना पूरा गर्न१.५ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने
WHO ले मन्त्री कल्पना पाण्डेको राेगकाे बारेमा अनुसन्धान गर्ने
कोरोना तेस्रो लहर – बालबालिका प्रभावित हुन सक्ने
होटलमा लुकाएको २२० डोज खोप सहित स्वास्थ्यकर्मी नियन्त्रणमा
खोपको लेखाजोखा – कति आए , कति आउन बाँकी ?
खोप कार्यक्रममा ठेलमठेल – कोरोना टार्ने कि सार्ने ?
सरकारले राख्यो १७ जिल्लालाई अति उच्च जोखिम क्षेत्र
झण्डै ३ लाख डोज जान्सेन खोप लगाएपछि बल्ल बन्यो मार्गनिर्देशन
असोज दोस्रो सातादेखि तेस्रो लहर आउन सक्ने